Qaraan Lagu Qayili Jiray oo la Helay Kuwii ku Qayili Jiray – Rasaasa News
Waxaan rabaa in aan dadweynaha sharafta badan ee Somalid Ogadeeniya u soo gudbiyo qiso dhab ah oo ka dhacday xaafad ku taala Minneapolis gaar ahaan EDEN PRAIRIE,MN iyo Qisadaas oo aan awal hore loo ogayn in badana socotay.
Sidda aad la socotaan halganka soomaalida ogaadeeniya waxaa lafdhabar u ah lacagaha ay bixiyaan shacabku dibad iyo gudaba. Hadaba intii ay soo ifbaxday in aan lacagta qaaraanka ee dadweynuhu bixiyo aan la gaadhsiinin naftoodhurayaalkii loogu talo galey, oo ay ku baxdo oo kaliya meelo aan loogu talo galin.
waxaa cadaatay, in qayb ka mid ah Qaaraanka laga qaado dadweynaha ay qaataan kuwa soo ururiya iyo laba qaybood oo ay ku garaabeeyaan kuwa garaabadu dilootay ee cawrada ku ah halganka ummada, ayey adkaatey in lacagihii qaaraanka ahaa la helo.
Hungurigu waa dhibaato qaarkeen lagu salidaye, waxaan idiin haynaa qiso qosol leh oo dhacday, Maalintii Arbacada ee ay Bisha June 3, 2009 ahayd 3:00PM GALABNIMO, ayaa waxaa isa soo raacey,CALIYARE[SALIID] Maxamuud [GARAABO] ABDI DHEERE[BUUBAA] CUMAR GAAB oo loo yaqaan [CUMAR HILIBLE] MAGACANA oo uu KULA BAXEY ISAGA OO HILIB KA QALI JIREY MAGAALADA FAARIBAULT,MN iyo 3 gabdhood oo aanaan magacooda sheegeynin. Waxayna yimaadeen xaafada WEST WIND EE EDEN PRAIRIE,MN si ay u soo uruursadaan waxooggaagii lagu garaabeyn jirey oo baryahan adkaatey helitaankiisu.
Waxaadna la socotaan in arinta qaaraan uruurinta baryahan la isku fahmay aadna ay xasaasi u tahey, dadkaa kor ku xusan inta ay isku soo raaceen ayey xaafadaha oo isku dhaw darteed baabuurtii dhigteen meel barkin ][parking] ah oo guryaha u dhaxeysa ka dibna sidii caadadda u aheyd ayey gabdhihii iska hasoo hormariyeen oo yiraahdeen bal ordaya oo xaafadaha gargaraaca, qolyaha in fahmayna iska ilaaliya, gabdhiha oo ugu fashilmey maalmihii la soo dhaafey in ay wax helaan, ayaa ku adkeystey in lays raaco oo aan loo kala tagin, wayna ogolaadeen, oo waa lays raacey dhowr guri ayaa lagaraacey, markii laga furey ee la arkey kuwa ay yihiin ayaa albaabkii laga horkeeney lana yiri GARAABOY WARKAAGU WAA ISOO GAADHEY.
Qoraxda oo maalintaa aad u kululayd iyo foorjo xun oo ku dhacday darteed ayey dhidid qoyeen ileen waa niman aan rafaadka ay lacag guristuleedahey ubaranine oo awal hore gabdhaha ku hoos noolaaye. Kolkaas ayey Gababdhihii ku yidhaahdeen bal orda oo kaligiin taga anaga daraadana ayaa lacagta la idiinku diidaye, reeraha albaabadooda kaligiin garaaca oo utaga, Gabhihii oo iyaga laftoodu ka xun lacagla’aanta, ayaa dhaqaaqey oo guryo kraale tagey waxbase kamey helin,gabdhihii ayaa guri ay ku guul daraysteen banaaanka uga soo baxey, gabadh ayaa fasaleeti ay wadatey oo ay dhididka is kaga tirtey jeebka gashatey, qoladii macalin xagaa ee CAWRO QAAWAN ayaa arkey gabadhii oo jeebka waxsii galineysa, hoosta ayaa layska gujiyey oo la yidhi wallee garaabadii way aslaaxdey. Gabdhihii ayaa soo noqdey oo u sheegey in aaney waxba helin,halmar ah ayey wada yiraahdeen NAA HEBLA CIYAARTA NAGA DAA WAADIGII JEEBKA WAXGALINAYAYE gabadhii oo aan fahmin waxa laga hadlayo ayaa tidhi wallaahi wax maanu helin, waa laysu iljabiyey oo CALI SALIID lagu yiri GABADHA BAADH, CALI[SALIID] ayaa gabadhii jeebkeeda gacanta galiyey, Maxamuud GARAABO oo arkey in uu saliid garabmarey jiibkii fasaleetigu ku jirey ayaa jeebkii kale gacanta galiyey,gabadhii ayaa qeylo afka furatey.
Waxaan soo xasuustey NIN MEELI UCADAHEY MEELI KAMADOW.
Waxaa ay ka dharagsan yihiin dadweynaha Somalida Ogadeeniya foolxumooyinka ay ku dhaqmaan kooxdan, waayo waxaa wax laga naxo ah dad isu soo qaawiyey in ay ku noolaadaan qaaraan ay si khaldan ku uruuriyaan iyaga oo isticmaalaya magac Jwxo. Waxaa buuxa W/Maraykanka shaqooyin badan oo laga heli karo lacago xalaal, dadka kuwooda aan shaqaysan karin waxaa lacag siiya dawlada taas oo loogu talo galay in ay ku noolaadaan.
Hadaba, waxaa is abaabulay kooxo ma shaqaystayaal ah oo ay had iyo goor Garaabadu afka ugu jirto, kuna beerlaxawsada dadweynaha in ay qaaraan u uruurinayaan N/hurayaalka ku gaajaysan gudaha dhulka Somalida Ogadeeniya.